Cilmi-baarista iyo Tababarka
Asalka iyo Sababaha Machadka
Machadka Qaranka ee Caafimaadka Taariikh
Machadka Qaranka ee Caafimaadka (qaataha) Somalia waa dawladda Hay'adda caafimaadka dadweynaha Golaha Wakillada in waa hay'ad sharci oo u maaliyadda, maamulka, iyo farsamo madaxbannaanida, iyo sidoo kale xaq u yeelashada sharciga ah in ay ku talaabsato oo dhan falalka iyo shuqulladaada oo hubiya gaaro igmaday . The sharciyad iyo tilmaamaha machadka noqon doonaa si waafaqsan in qaab-dhismeedka hay'adaha dawladda kale ee federaalka ah ee Soomaaliya. Qaataha xoogga saari doonaa arrimaha caafimaadka dadweynaha qaranka ku dheehan yahay ee Macluumaadka waxaa loo adeegsan doonaa raad khataraha caafimaad, ogaanshaha dhibaatooyinka soo baxaya, hagaajinta daaweynta, iyo qiimaynta barnaamijyada. Sidaa darteed, machadka talo ka bixin doona cadaymo ku salaysan inay Wasaaradda Caafimaadka iyo Adeegyada Aadanaha ee (MOH & HS) iyo sidoo kale in Maamulka Gobolka mas'uulka ka ah caafimaadka iyo waxa ay sidoo kale u shaqeyn doonaa sida shaybaarka tixraac qaranka ee cudurrada faafa.
Badbaadadu ee machadka
Labada sano oo jaah-wareer ah ee Soomaaliya ayaa saamayn xun ku yeelatay nidaamka daryeelka caafimaadka ee dalka. Waa midda koowaade, ay sabab u qoto dheer maskaxda-shubeyso of xadidan hawl wadeenada caafimaadka ee dalka, iyo marka labaad, burburkii hay'adaha caafimaadka ay ka mid yihiin waxbarashada iyo hay'adaha cilmi-baarista iyo sidoo kale isbitaalada iyo goobaha muhiimka ah ee kale ee caafimaadka dadweynaha. Sidaas darteed, ka FMOH of Somalia reserved ma dadaalka dib u dhiska nidaam caafimaad ee waddani ah in uu yahay awood bixinta adeegyada caafimaad oo waxtar leh iyo waxqabad leh. Laakiin, ay sabab u tahay yaraanta khayraadka aadanaha aqoon leh, iyo maqnaanshaha hay'ado caafimaad oo muhiim ah, nidaamka daryeelka caafimaadka ee Soomaaliya ayaa soo wajahay inadequacy ka badan.
Guusha u dhiska nidaam caafimaad ee joogtada ah ee Somalia waxa ay ku xiran helitaanka caddaynta ku salaysan macluumaadka caafimaadka qaranka in Toosiya MOH & HS iyo ciddii kale ee lagu aqoonsado mudnaanta, dhaqmaadka caddayn ah oo ku salaysan Siyaasadda caafimaadka qaranka oo markii dambe go'aan qaadashada in la hagaajiyo nidaamka daryeelka caafimaadka ee dalka . In quruumaha ugu, sida macluumaadka ku saleysan caddeyn waxa lagu bixiyey in ka MOH & HS hay'adaha u dhigma ah loogu sameeyey this ujeedada caafimaadka dadweynaha gaar ah.
Si kastaba ha ahaatee, asaasidda sida hay'ad ku hawl badan in Somalia u baahan tahay joogitaanka shaqaalaha caafimaadka oo aqoon heer sare leh awood si loo horumariyo oo loo hirgeliyo mashaariic caafimaadka dadweynaha sare oo cusub oo cilmi-baaris. Markii ay arkeen maqnaanshaha sida hay'ad muhiim ah in Somalia, abuuritaanka qaataha ku hoos MOH & HS loo arkayay inay la shaqeynta iyo isku dubaridka oo ka mid ah wada-hawlgalayaasha qaran iyo mid caalamiba leh fikradda ah xoojinta FMOH u leedahay in ay horumariyaan daryeel tayo badan oo waara caafimaadka nidaamka dalka.
Aragtidayadu waa in la hagaajiyo caafimaadka ee dadka Soomaaliyeed iyada oo loo marayo is-dhexgalka cusub oo cilmi-baaris , waxbarasho, tababar , iyo ka-hortagga iyo xakameynta cudurada si loo gaaro ugu tayada sareeya ee nolosha iyo sinaanta ee caafimaadka .
Hadafkeenu waa in aan kor iyo Ilaalinta caafimaadka ee dadka Soomaaliyeed ee ay wax ka qab
Baaxadda Work ee machadka
Bixinta talo caddayn ku salaysan in Wasaaradda Caafimaadka iyo Adeegyada Aadanaha ee (MOH & HS) iyo sidoo kale in ay Waaxda caafimaadka ee gobolka iyo nafaqada iyo sidoo kale u dhaqmaan sida shaybaarka tixraac qaranka ee cudurrada faafa.
La shaqee, wasaaradaha dowladda ee ku habboon iyo hay'adaha dowladda si ay u qorsheeyaan xeelado isgaarsiinta ku saabsan arimaha caafimaadka dadweynaha iyo wax ka qabashada cudurka dillaacay
Baaraa safmar ah iyo cudurrada kale ee faafa iyo xoojiyo socoshada cudurada kuwaas
Cilmi baaris lagu sameeyo jyo ka hortagga iyo xakameynta cudurada muhiimad u leeyihiin caafimaadka dadweynaha ee Soomaaliya iyo meelo ka baxsan
In kor loo qaado control / hubinta tayada ee habka shaybaadhka
Qiimaynta waxtarka ay siyaasadaha caafimaadka dadweynaha sida ku haboon iyo horumarinta tilmaamaha si loogu tixgeliyo
Bixinta tababarka iyo dhisidda awoodda shaqaalaha caafimaadka markaana soo saaraysa shaqaale caafimaadka dadweynaha ee meelaha ay domain
Xoojinta cross kaashanaya xadka iyo xaaladaha degdegga ah ee caafimaadka bulshada ee gobolka.
Waajibaadka kale ee loo qoondeeyay in machadka ay MOH & HS.
taan arrimaha caafimaadka dadweynaha muhiim u ah dalka marayo caddayn macluumaadka caafimaadka dadweynaha ku salaysan in hanuuniyo maamulka caafimaadka dadweynaha go'aan qaadashada .
Ku-simidda ah MOH / HS focal point ee horumarinta iyo xoojinta nidaamka caafimaadka dadweynaha ee qaranka
In la kordhiyo awoodda farsamo si ay si fiican uga jawaabaan sababaha ugu waaweyn ee cudurrada, dhimasho iyo naafada
Si kor loogu qaado xirfadaha ku saabsan barnaamijyada caafimaadka dadweynaha sida HIV / AIDS, TB, Duumada, cudurada talaalka looga hortago iyo cudurada daba-
In la horumariyo qorshaha istaraatiijiyadeed ee mudada dheer ee nidaam waara oo caddeyn ku dhisan in uu wax ka qabanayaa culaysyada ugu waaweyn ee caafimaadka dadweynaha
Si marti tababarka caafimaadka dadweynaha iyo guriga mustaqbalkiisa u kaadiriin khubarada caafimaadka dadweynaha bartay degaanka (shaqeynayeen loo baahan yahay si looga hortago oo lagu xakameeyo cudurro dillaaca) a
Si aad u dhigay goolkii ugu weyn ee machadka in line leh ilaalinta amniga caafimaadka guud iyada oo ay gacanta ku, iyo ka hortagga cudurka, dhaawac, iyo naafada.
Si aad u dhigay baarta gaar ah oo ku saabsan cudurada faafa, jirooyinka raashinka, deegaanka iyo caafimaadka
Si aad u noqoto xarun digniin hore in ay aqoonsadaan sababaha, curiyeyaasha halista, iyo waxqabadyo ku haboon oo muddo dheer follow-up for khatarta caafimaadka dadweynaha